Ady saritaka, ady paritaka… | NewsMada
Mafimafy, sarotsarotra… Izay ny fiatrehana ny ady amin’ny firongatry ny valanaretina Covid-19 andiany faharoa amin’izao. Tsy vitan’izay, tsy fantatra hoe mandra-pahoviana? Hiditra amin’ny vanim-potoana ririnina i Madagasikara, saro-binaniana be ihany izay mety ho fivoarana sy fiovan’ny valanaretina: hahery vaika, halemy… ? Tsy maintsy miomana ny tena, miambina, mitandrina.
Amin’izany, mbola misy ihany ny mania manao ady saritaka. Ny tsy hifantohana sy hiraisan’ny rehetra hina amin’ny ady iombonana, sanatria, no kendren’ny sasany? Fahavalo tsy hita maso sy mahery vaika no iadiana; eny, na hita izao aza fa mamely sy mandripaka: tsy izay loatra no iadian’ny sasany fa izay hitan’ny maso. Tsy mety sy tsy mahomby avokoa izay mitranga sy atao amin’izao?
Fitsikerana, fanaratsiana, fanakiviana, fankahalana, fanenjehana… Izay no hoe fanampiana amin’ny sasany amin’ny ady sarotra atrehin’ny firenena izao? Sanatria, manao ady saritaka na ady paritaka… hoe hampiharihary tsy takona afenina ny tsy fahombiazana sy ny fahavoazan’ny mpitondra. Misy mahita na miandrandra tombontsoa manokana amin’ny fiparitahan’ny aretina ve?
Tsy karazany manampy trotraka amin’ny firongatry ny aretina amin’izao ve fitsikerana, fanaratsiana, fanakiviana, fankahalana, fanenjehana… ? Tsy hita marina izay tena torohevitra hanitsiana ny lesoka, amin’izay mahasoa sy mahatsara ny vahoaka sy ny firenena… Avadika politika ny raharaha ka tsy mandeha amin’ny fahitsiana fa misafelipelika amin’ny kajikajy sy paipaika politika?
Izay no mahatonga ny ahiahy tsy ihavanana hoe ady saritaka no kotrehina na afitsoky ny sasany: manakorontana. Tsy vitan’izay, ady paritaka: mahatonga ny ady tsy ho iray hoe iombonana sy mampiombona. Sanatria, mampiparitaka aretina aza? Mibahan-toerana tsinona ny politika fa tsy izay fahasalamam-bahoaka. Mitady hahazo vahana izany karazana tsimokaretina izany amin’izao?